कहाँ के गर्दै छन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू ? « Naya Bato
कहाँ के गर्दै छन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू ?
काठमाडौँ । दरबारको शान, सौकत र शासन त्यसै दिन ढलेको थियो, जुन दिन कहालीलाग्दो दरबार हत्याकाण्ड भयो । गीत बदलियो, रीत बदलियो । विगत परिमार्जित भएर वर्तमान फरक देखियो । सबै कुरा परिवर्तन नै थियो ।
हिजोको मामाघर आजको संग्राहलय बन्यो । तर, मन बदलिएन । देश र आमा उस्तै हुन् । जति आमाको माया हुन्छ, त्यति देशको माया हुन्छ । त्यसैले होला स्व. अधिराजकुमारी श्रुति शाह राणाका छोरीहरू बारम्बार सम्झिरहन्छन् आमा र देश ।
वंश नाश भएको बेला पुरै देश शोकमा डुबेको थियो । वीरेन्द्रको वंश विनाससँगै नेपालमा राजतन्त्रको पनि पतनका दिन सुरु भइसकेको सङ्केत देखिएको थियो । पुनः राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रले गद्दी सम्हाले पनि मुलुकको राजनीतिक परिवेशको आँधी बेहरीले दरबारलाई संग्राहलयमा परिणत गरिदियो ।
त्यही संग्राहलयमा घरी–घरी झुल्किने गरेका छन् बाल्यकालमा नै गुमाएकी आमादेखि मावलीको सम्झनाका लागि गिर्वाणी र सुरङ्गना राणा । छोरीले पनि समान अधिकार पाएको देशमा धेरैले राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको कथा सुनाउँछन् । केही समयअघि देखा परेका दुवै छोरी हुर्किएका छन् ।
श्रुतिको हत्या हुँदा गीर्वाणी राणा तीन र सुरङ्ना दुई वर्षकी मात्र थिइन् । अहिले गीर्वाणी २० र सुरङ्गना १९ वर्षका पुगे । यसअघि गिर्वाणी १४ वर्षको उमेरकी हुँदा मावलीको तस्बिर हेर्नका लागि आर्ट काउन्सिलमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँ उनी पुरै तस्बिर हेर्न नसकेर भक्कानिएर रोएकी थिइन् ।
२०६९ सालमा आमाको फोटो हेरेर गीर्वाणीको आँखाबाट आँसु बग्दै गरेको फोटो फेसबुकमा भाइरल भएको थियो । शाही चिकित्सक खगेन्द्र श्रेष्ठले खिचेका पूर्वराजपरिवारको तस्बिर प्रदर्शनी हेर्न बाबु गोरख शम्शेरसितै त्यस बेला पनि उनी गएकी थिइन् ।
कजन सिस्टर ब्रदर (पारसकी छोरीहरू र छोरा)सँग उनी पुनः नारायणहिटी पुगेका थिए । नारायणहिटीको गेटमा राखिएको दिवङ्गत राजपरिवारको फोटोमुनि मैनबत्ती बाले, पुष्पगुच्छा चढाएर उनीहरूले नयाँ र पुरानो राष्ट्रिय गानसमेत गाएका थिए । दुई महिनापछि फेरि आउँदै छ स्मृति दिवस ।
‘हरेक स्मृति दिवसमा आमालगायत मामाघरका सबै सदस्यलाई श्रद्धाञ्जली दिने गरेका छन् ।’, दरबारका सहयोगीहरू भन्छन्,‘अध्ययन गरिरहे पनि आमाको माया र आफन्तको प्रेम भुलेका छैनन् ।’
आम साधारण सरह तस्बिर खिच्ने, परिआएको रीतलाई पनि पुरा गर्ने संस्कार श्रुतिका छोरीहरूमा भेटिन्छ ।
त्यसैले जोर्डनकी रानी नूरले भने जस्तै राजपरिवारका यी किशोरी अवशेषहरू पनि राजपरिवारको सदस्य भएर शक्तिको वरिपरि भन्दा पनि शान्तिपूर्ण समूहमा बस्न रूचाएका छन् । यिनलाई रानीका सन्तान भन्ने कत्ति पनि लागेको छैन । त्यसैले मिडिया भन्दा पनि टाढै छन् । – दैनिक नेपाल